Izinqolobane Zokuhlubuka - Ukubalwa Kwembuso
Tag Archives: Ukuhlubuka
USimona no-Angela - ISonto likwiNtuthu kaSathane
Thandazela amadodana ami engiwakhethile, ukuthi ayeke ukudala ihlazo.
Luz de Maria - Ngizosifinyeza Isikhathi
Izinsuku zizodlula; kumele nizilungiselele.
UPedro - Izikhathi Zokudideka Okukhulu
Thandaza kakhulu… awuwedwa!
ILuz de Maria - Imifula Yokungalaleli
… Zihola isintu kumphikukristu.
1 2 3 4 5 6 Okulandelayo »